Sharuudo adag oo lagu xiray diyaaradaha ka howlgala Garoonka Adan Cadde & Wel wel soo wajahaya�� |
Sharuudo adag oo lagu xiray diyaaradaha ka howlgala Garoonka Adan Cadde & Wel wel soo wajahaya��
Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka,Duulista iyo Hawada ee Xukuumadda SoomaaliyaA� ayaa sheegay inA� Diyaarad aan sharuudaha looga baahan yahay u dhameystirneyn ay ka shaqao gali garin Garoonka DiyaarahaA� Adan cadde ee Magaalada Muqdisho.
Si loo hubiyo adeegyada ay u baahan yihin diyaaradaha kasoo dego iyo kuwa ka baxa garoonka Aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyo badqabka isticmaalka hawada dalka ayuu ku saleysnaa kormeerka maanta Wasiirka Wasaaradda Gadiidka iyo Duulista HawadaA� oo ay wehliyaan maareeyeyaasha Garoonka.
Maareeye ku-xigeenka Amniga iyo Maamulka GaroonkaA� Duuliye A�Ceyndaruus Axmed Kaahiye ayaa wasiirka uu sheegay in shaqada diyaaradaha ka soo dego oo kor u kacay, islamarkaan ay jiraan shirkado soo codsaday in ka Howlgalaan Gudaha Dalka.
a��a��maalintii diyaarahada kasoo dego karoonka waxay ay gaareen in kabadan 50 islamarkaana shaqada Garoonka ay Sii balaaratay haatan waxaa jira codsiyo farabadan shirkado diyaarado oo rabo in ay ka howlgalaan gudaha dalka a��a��a�� Ayuu yiri Duuliye Ceyndaruus Axmed Kaahiye.
Mudane Maxamed Cabdullahi Salaad Oomar Wasiirka Wasaaradda GadiidkaA� iyo Duulista Hawada ayaa Faray Shirkadah Diyaaraha iney ka shaqeeyaan in rakaabyada ayA� heleen adeegyo dhammeystiran waxa kale uu sheegay in ganacsatada aan sharuudaha looga baahan yahay buuxinin aysan ka Howlgalin Karin Garoonka.
a��a��laga bilaabo maanta ay tariiqdu tahay 12 07-2018 waxaa la farayaa in shirkadaha diyaaradaha ee ka Howlgalo Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqisho looga baahan yahay sharuudaha in ay shaqeeyaan badqabka rajaamka cidii dhammeystiri weysana aysan ka shaqeyn Karin Garoonka Adan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde a��a��a�� Ayuu yiri Wasiir Oomaar.